३२६ वटा भेडा पहिरोमा पुरिए पछि लीलप्रसाद भन्छन अझै राम्रोसँग निदाउन सकिरहेको छैन ! - Onlinenews Global
June 23, 2021 laxmiLeaveaComment on ३२६ वटा भेडा पहिरोमा पुरिए पछि लीलप्रसाद भन्छन अझै राम्रोसँग निदाउन सकिरहेको छैन !
पोखरा । सयौं भेडाबाख्राको हुल । भेडाहरुलाई पछ्याउँदै हिंडिरहेका चार भोटेकुकुर । भेडाहरुको चाल र घाँटीमा झुन्डाइएको घन्टीबाट आवाज आउँदा गाउँ नै संगीतमय हुन्थ्यो । भेडाका बथानै लिएर गाउँ पस्दा सबैले सबै भन्थे, ‘अहो ! लिलेका भेडा त सप्रिएछ । भेडालाई माया गर्न त जानेकै हो ।’***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
गुरुङले भेडा नबेचेपछि अर्कै व्यापारीसँग किनेर दशैं मनाए । उनी भने आफ्नो भेडा बचेकोमा मख्ख भए । केही दिनमै गाउँमा बाघ पस्यो । ७ वटा भेडा बाघको आहारा बने । पुसको सुरुमा मात्रै गुरुङका भेडाहरुमा रोग देखियो । एक–दुई गर्दै १५० भन्दा बढी भेडा मरे ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
त्यो दिनदेखि गुरुङ बेचैन छन् । आफ्ना सबै सम्पत्ति मानेको भेडा पहिरोले बगाएपछि के गरौं कसो गरौं भयो । ‘त्यहाँ पनि फोन टिप्दैन । एउटा होटलमा भएको वाकीटकीबाट खबर आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै पानी परेर बाटो बिग्रिएकाले जान सक्ने अवस्था रहेन ।’ पहिरोमा परी आफ्नो ६० लाखभन्दा बढी क्षति भएको उनी सुनाउँछन् ।
उनका अनुसार २४ वटा भेडा र एउटा कुकुर मात्रै बचेका छन् । ‘पानी परेको पर्‍यै भएर खोला बढ्न थालेपछि केटाहरु माथितिर भागेका रै’छन् । त्यैबेला पहिरो गएछ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘६० सालपछि पहिलो पटक यसरी खोला उर्लिएको देख्यौं । त्यतिबेला पनि यति बिजोग बनाएको थिएन ।’
भेडाबाख्रा र कुकुर पहिरोमा पुरिएको एक हप्ता बित्यो । लीलप्रसाद अझै राम्रोसँग निदाउन सकिरहेका छैनन् । घरिघरि तिनै भेडाहरुको याद आउने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘मेरो जीवन भेडाको पछि लागेर बित्यो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘फेरि पनि ऋणधन गरेरै भेडा पाल्छु । अर्को काम जानेकै छैन***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
विवाहित हुँदाहुँदै प्रेमीसँग झा’डीमा यु’वती भेटिएपछि गराइयो यस्तो हाल” (हेर्नुहोस् भिडियो) !
एकै परिवारका ४ जना’को संक्रमणबाट मृ;त्यु,… गाउँ नै सखाप होला जस्तो भो – भन्छन् वडाध्यक्ष